ASALKA ASALKA AH "UBAXA DUMARKA", NOOCYADA UGU WAAWEYN EE SPATHIPHYLLUM - SPATHIPHYLLUM
Waxaa jira dhirro yar oo ku yaalla Dhulka, oo ku hareereysan rabitaan badan, caqiidooyin iyo nacayb, sida spathiphyllum. Magacyada ubaxa - "ubaxa dunidoo", "cagaarka cad", "ubax-dabool" ...
Ma taqaanaa? Spathiphyllum ayaa markii ugu horreysay laga helay jasiiradaha Ecuador iyo Colombia waxayna ku sharraxeen Gustav Wallis, oo ah ururiyaha dhirta ee Germany, 1870-kii. Mid ka mid ah noocyada ayaa lagu magacaabaa cilmi-baaraha (Wallis ma uusan ka soo noqonin safarka).
Dadka reer Pacific waxaa badanaa lagu magacaabaa "ubax dumar ah", "farxad gabdhaha" waxayna aaminsan tahay in ay caawin karto:
gabadha aan is qabin si ay u hesho xannibaadda;
Ilmo aan lahayn - in la siiyo dhalashada;
xaasaska - si ay u gaaraan isku-noolaansho iyo qanacsanaanta guurka.
Haddii aad siisid "ubax dumar ah" gacmo khaldan - farxad ayaa guriga ka baxaysa.
Waqooyiga Ameerika, mudada lamaane-nacaybka ah ee Hindida ah waxay ahayd bilowgii ubax ee ubaxkan.
Spathiphyllum: asalka, astaamaha iyo noocyada
Homeland of spathiphyllum - Warshad qallafsan oo qashinka ah oo qashinka ah - qulqulo qulqulaya webiyada iyo haraha keynta geedka kulaylaha Koonfurta iyo Bartamaha Ameerika, Koonfur Asiya. Noocyada ugu waaweyn ee spathiphyllum waxay ku badan yihiin Brazil, Colombia, Guiana, Trinidad, Venezuela, Philippines.
Ubaxa wuxuu magaciisa ka helayaa ereyada Giriiga: "Spata" iyo "phillum" ("caleen" iyo "caleen"). Duufaanta dhirta waa fuuqbax yar oo cadcad (oo ka kooban ubaxyo yaryar) iyo muraayad cadaan ah, oo ujirta sida shahwada (ka dib markuu ubaxu hoos u dhaco, waxay noqon doontaa cagaar). Dhererka - 30 - 60 cm.
"Rajada haweenka", sida caadiga ah Blooms guga (noocyada qaar - mar labaad - dayrta-jiilaalka). Inflorescences waxay haysaa 1.5 bilood.
Waa muhiim! Spathiphyllum uma dulqaadan karo qoraalada iyo qorraxda dhalaalaya.
Caleemaha waa weyn, lance-sida, caleenta cagaaran, oo leh dhalaalaya dhalaalaya. In spathiphyllum, asliga ah ayaa ku dhowaad maqan, iyo caleemaha si dhakhso ah u koraan dhulka. Inflorescence waxay leedahay ur wacan.
Daryeelka ubaxa waa mid aan loo baahnayn, spathiphyllum waa wax aan qabin:
waxay u dulqaataa penumbra iyo raajadaha kala firdhiya qorraxda;
heer kulul xagaaga - + 22-23, xilliga qaboobaha - aan ka hooseeynin + 16 ° C;
faafin by gooyn (apical) ama qaybta rhizomes;
wuxuu jecel yahay ciidda waxoogaa acidic ah;
xilliga xagaaga, wuxuu jecel yahay waraabin badan iyo buufin, xilliga jiilaalka - dhexdhexaad ah.
Waa muhiim! Marka ubaxu u baahan yahay si loo hubiyo in biyaha uusan ku dhicin inflorescence
Wadar ahaan adduunka waxaa jira 45 nooc oo Spathiphyllum genus ah. Ubax "Rajo Dumar" (sida dhaqanka gudaha) waxaa ka mid ah noocyada qaar. Thanks to shaqada xulashada, noocyo badan oo noocyo kala duwan oo isku dhafan ah ayaa soo muuqday (Mauna Loa, Adagio, Figaro, Kroshka, Alpha, Quatro, iwm). Waxay adkaadaan oo barbaaraan sanadka oo dhan.
Wallis's Spathiphyllum waa ubaxa ugu badan ee gudaha
Warshadu waxay ku fiican tahay koritaanka qolka (waxaa jira noocyo cüif ah oo ah spathiphyllum).
Heerka Spathiphyllum ee Wallis waa 20-30 cm Caleemaha (4-6 cm ballaaran, 15-24 cm dheer) waa lanceolate, cagaar madow. Caddaanka cad wuxuu yaryahay (laga bilaabo 3 illaa 4 cm), buste cad oo saddex jeer ka dheer deynta. Blossoming waa dherer iyo dheer (laga bilaabo guga ilaa dayrta).
Ma taqaanaa? Spathiphyllum waxay saameyn ku leedahay bay'ada: waxay tirtiraysaa walxaha waxyeellada leh ee hawada ka yimaada (formaldehydes, carbon dioxide, benzene, xylene, iwm), sii deynaya oxygen, burburin kara caaryaal, bakteeriyada waxyeellada leh, waxay yareyneysaa gumeysiga sheyga.
Spathiphyllum kalluunka: daaqada ka soo baxa Thailand
Tani ma aha spathiphyllum aad u weyn. Dhulkiisa - Jasiiradda Trinidad (ee Thailand, noocyada noocaas ah waxay koraan dhaqanka gudaha). Caleenta cagaaran ee cagaaran sida (25-40 cm dheer, 8-16 cm ballaaran) ee spathiphyllum caleen cannolic u eg caleemaha canna. Jeexdin jilicsan-cagaaran (5-10 cm) on peduncle (ilaa 20 cm) ayaa leh ur wanaagsan oo ursan. Daaha (dhererka 10 ilaa 22 cm, width 3-7 cm) waa caddaan dusha sare, cagaarka hoose - 2 jeer ka dheer cob.
Marar dhif ah. Marna ma dhacdo.
Spathiphyllum ugu caansan oo soo jiidasho leh "Chopin"
Spathiphyllum "Chopin" - noocyo isku dhafan. Baaxadda yar ee spathiphyllum (dhererka aan ka sareeynin 35 cm), isdhexgalka iyo qurxinta wuxuu ka dhigay mid aad u jecel fareebka-jecel. Caleemaha waa cagaar cad oo dhalaalaya. Daboolku wuxuu leeyahay qaab la isku qurxiyo iyo midab cagaaran. Time ubax - laga bilaabo Maarso ilaa Sebtember (Blooms 6-10 toddobaad).
Ma taqaanaa? Inta lagu jiro xilliga sii kordhaya (Maarso - Sebtembar) waxaa suurtogal ah in lagu quudiyo ubaxa leh Bacriminta aan lahayn lime ("Azalic", iwm).
Soomalida "Spectiphyllum" oo ah nooca ugu weyn
"Dareenka" ee Spathiphyllum oo laga helay Holland. Dhererka - 1.5 m. Caleemaha cagaaran ee cagaaran (dhererka - 70-90 cm, width - 30-40 cm). Dhererka ilbiriqlaha leh barafka cad-caddaankiisu wuxuu noqon karaa ilaa 50 cm.Dhulku wuxuu u dulqaadanayaa mugdi ka fiican noocyada kale ee spathiphyllum. Waraabinta waa in lagu sameeyaa biyo jilicsan.
Waa muhiim! Calaamadaha la'aanta iftiinka - caleen ayaa la soo saaraa, waxay noqotaa cagaar madow, joogsiyo ubax ah
Spathiphyllum "Domino" - aragtida ugu xiisaha badan
Waa noocyo kala duwan oo farshaxan leh oo leh caleen caleen ah oo cufan (caleemo waa cufan, strokes cad oo asal ah cagaar). Inflorescence ee cagaaran ama jilicsan-jaalaha ah iyo sariirta cad. In badan oo fudud-u baahan. Habeenkii, caraf udgoonku wuu lumaa.
Tirada Domino waa dhexdhexaad (dhererka - 50 - 60 cm, dhererka caleen - 25 cm, width - 10 cm Cagaarka - laga bilaabo Maarso ilaa Sebtembar (qiyaastii 6-8 toddobaad).
Spathiphyllum "Picasso" - qof cusub oo aan caadi ahayn
Kala duwanaantan cusub ayaa sidoo kale la soo gooyaa Holland (oo ku saleysan Wallis spathiphyllum). Haddii bedelay Dominoes. Laakiin si aad u riix "Domino" ayuu ku fashilmay - wuxuu u baahan yahay iftiin badan oo iftiin leh (iyada oo aan qorraxdu si toos ah lahayn).
Kala duwan Tani waxaa lagu kala soocay saameyn ku qurxinta badan: cagaarka iyo cagaarka cad oo si aan kala sooc lahayn loogu beddelo caleemaha. Waxaa lagama maarmaan ah in laga saaro inflorescences wilted wakhtiga si markaa cusubi u muuqdaan kuwo deg deg ah.
Spathiphyllum waa ubaxu - magacu wuxuu u hadlaa naftiisa
Cirifka dhirta - ilaa 50 cm Caleemaha waa cagaaran iftiin (dhererkiisu 13-20 cm, width 6-9 cm) waxay leeyihiin gees xoqan. Lugaha - illaa 25 cm, daboolka cad (dherer 4-8 cm, width 1.5-3 cm). Cobka dhererka - 2.5-5 cm. Bloom ballaaran - dhammaan sanadka oo dhan. Gooyo ubax ayaa lagu hayn karaa biyaha ilaa 3 bilood.
Waa muhiim! Spathiphyllum waa mid dhexdhexaad ah: Calcium oxalate wuxuu keeni karaa gubasho ka dib markii uu taabto xuubka xuubka iyo xuubka neefta, oogista xuubka mindhicirka.
Maqaalka, waxaad la kulantay noocyo kala duwan oo "farxad haween ah." Waxaan rajeyneynaa in ubax qurux badan uu gurigaaga keenayo
https://lezgka.ru so.lezgka.ru © Spathiphyllum 2019